Emily Dickinson. Makore 189 ekuzvarwa kwake. Kusarudzwa kwenhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo. Amherst Koreji
Emily dickinson Icho chimwe chei vanonyanya kudetemba munhoroondo yezvinyorwa zveAmerica uye zvepasirese, padanho revamwe vake Edgar Allan Poe kana Walt Whitman. Nhasi kwakazvarwa muguta reAmherst, Massachusetts, mu 1830.
Basa rake rakaratidzirwa nedzidzo yakeKunyangwe yaive pakati pevazhinji vanhu vane hunyanzvi, yaive munzvimbo yepureni. Kubva pahupenyu hwakavanzika, saka zvaive zvake kubudisa, iyo yakanga yatogadziridzwa mushure mekufa kwake. Asi zvirinani kuti uverenge pane kutaura nezvazvo. Saka ndipo pazvinoenda kusarudzwa kweimwe yenhetembo pfupi pfupi uyo akanyora.
Waive mwanasikana uye muzukuru weanoenderana manhamba yenguva, asi iyo dzidzo munzvimbo yakaoma uye yakavharwa yakamuita iye a kusurukirwa uye munhu asina hanya. Nekuda kweizvozvo akange asina shamwari dzakawanda futi. Pakati pavo paive nemufundisi Charles wadsworth, aipesvedzera zvikuru kufunga kwake nhetembo. Zvakare aiyemura vadetembi Robert naElizabeth Barrett Browning, John Keats, pamwe nezvinyorwa zve Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, uye neyevanyori venhau Nathaniel Hawthorne naHarriet Beecher Stowe.
Basa rake rinobva kuna yakajairika yemitemo yayo maererano nechimiro uye zvemukati kune sublimation uye kutorwa kwerudo -kusave nerudo- kwepanyika kuna Mwari. Izvo zvakare chibereko chekusurukirwa kwake kwakakosha aida pasina chake. Uye dzimwe nguva inochinja-chinja pakati pechiedza nekujeka uye kuomarara kuwedzera njere. Asi hapana chinokanganisa kunzwa kwako. Idzi ndidzo dzimwe nhetembo dzinogara dzakapfupika.
Denga rakadzika, makore akashata;
kuburikidza nedura kana mugero
gakava kana zvichizoenda.
Mhepo yakaonda inonyunyuta zuva rese
mabatirwo aakaitwa nemumwe munhu.
Zvisikwa, sesu, dzimwe nguva zvinosungwa
asina bhandi rake remusoro.
Ziva kutakura chikamu chedu usiku
kana mangwanani akachena;
zadzai kusava nehanya kwedu nekuzvidza,
Heino nyeredzi, uye imwe nyeredzi iri kure:
Pano mhute, kupfuura imwe mhute,
asi gare gare zuva racho.
Kwaive kwatononoka kuMunhu
asi zvakadaro mangwanani kuna Mwari
Zvisikwa, hazvina simba rekubatsira
asi munamato waive kudivi redu
Kudenga kwakanaka sei
apo pasi risingakwanise kuwanikwa
Ane mutsa sei, zvino, kumeso
kubva kumuvakidzani wedu wekare, Mwari.
Handisati ndamboona renje
uye gungwa handina kumbobvira ndariona
asi ndaona maziso eheather
Uye ndinoziva kuti mafungu anofanira kunge ari chii
Handina kumbotaura naMwari
uye handina kumushanyira Kudenga,
asi ndine chokwadi kuti ndiri kuenda kupi kubva
sekunge vaive vandipa kosi.
Izvo ndaigara ndichida
kuti kusvikira ndada
kuti ndichagara ndichida
Ini ndichaikurukura newe
chinonzi rudo hupenyu
uye hupenyu kusafa
izvi-kana iwe uchikakahadzika- mudiwa,
bhuku ndiro rakanakisa mudziyo;
uye unofamba zvirinani mudetembo
iyo mune yakanyanya mweya uye inokurumidza kumhanya
Kunyange varombo vanogona kuzviita,
hapana kana chainofanira kubhadhara:
mweya mukutakura kwekurota kwayo
inodyiswa chete nekunyarara nerunyararo.
Mune ruva rangu ndakaviga
kuitira kuti, kana iwe ukanditakura pachipfuva chako,
usingazvifungire, iwe wanga uripowo ...
Uye vatumwa chete ndivo vanozoziva vamwe vese.
kuitira kuti, pandinotsvedza kubva mugirazi rako,
iwe, usingazvizive, unzwe
Kurota chipo chisingaoneki
izvo zvinoita kuti tive vapfumi kweawa
vanobva vatikanda isu varombo.
Kunze kwemusuwo wepepuru
Yepamberi isati yave yake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Emily Dickinson. Makore 189 ekuzvarwa kwake. Kusarudzwa kwenhetembo